MIUI7Tips & Tricks – NaingLinHan
July 2, 2016 July 10, 2016 /nainglinhan
1. Lock Screen ကနေ Camera သုံးမယ်
ဒါကတော့ တော်တော်များများ သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် အသုံးဝင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်လေးမို့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Lock screen ရဲ့ ညာဘက်အောက်နား က camera ပုံလေးကို ဘေးသို့ဆွဲပြီး camera app ကို lock မဖွင့်ပဲ တိုက်ရိုက်ဝင်လို့ ရပါတယ်။
2.အရေးပေါ် Flash Light
ဒီလုပ်ဆောင်ချက် ကတော့ လူသိနည်းတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် ဖြစ်မှာပါ။ Lock Screen မှာ Home ခလုပ် ကို ဖိထားခြင်းဖြင့် Flash မီးထွန်းနိုင်မှာပါ။ Home ကို ဖိထားတဲ့ အချိန်ပဲ မီးလင်းမှာဖြစ်ပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ရင် ပိတ်သွားမှာပါ။ Home ခလုပ် လွှတ်ထားတဲ့ချိန်မှာ Flash ဆက်ပွင့်နေစေချင်ရင်တော့ Power ခလုပ်နဲ့တွဲသုံးရမှာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် Power ခလုပ် နိုပ်တဲ့အထိ Flash ပွင့်နေမှာပါ။
3. Home Screen ကိုဘယ်လိုပြင်မလဲ?
MIUI မှာ Home Screen ကိုပြင်ဖို့အတွက် အလန်းစား လုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Home Screen မှာ လက်နှစ်ချောင်း ကို ဖိပြီး အတွင်းဘက်သို့ ဆွဲခြင်းဖြင့် Edit Mode ကိုဝင်လို့ရပါတယ်။ Menu ခလုပ်ကို ၃ စက္ကန့်ခန့် ဖိထားပြီးလဲ ဝင်ရောက်နိုင်မှာပါ။
Home screen မှာ လက်သုံးချောင်း ဖြင့် ဖိပြီး အတွင်းသို့ဆွဲခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ မိမိ နှစ်သက်ရာ Page ကို Home အဖြစ် သတ်မှတ် နိုင်ပါမှာပါ။
အစီစဥ်တကျမဖြစ်တဲ့ icon တွေကိုလဲ ဖုန်းကို shake ပြီးပြန် စီနိုင်မှာပါ။
4. Recent ကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲ?
မိမိအသုံးပြုခဲ့တဲ့ App တွေ၊ နောက်မှာ Run နေတဲ့ App တွေကို Recent မှာမြင်နေရမှာပါ။ တစ်ချိူ့ Viber, Messenger ကဲ့သို့သော app တွေကို နောက်ကွယ်မှာ ဆက် run နေစေချင်ရင် lock လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
Recent မှာ icon လေးတွေပဲ မြင်ရတာ မကြိုက်ရင် ဒီလိုလေး ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်။ Recent မှာ လက်နှစ်ချောင်းကိုဖိပြီး အပြင်သို့ဆွဲလိုက်ပါ။
App info ကိုလဲ Recent ကနေ အမြန်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ Gallery ရဲ့ App info ကိုသွားချင်တယ်ဆို Recent က Gallery Icon ကို နှစ်စက္ကန့်လောက် ဖိထားလိုက်ပါ။
Recent က X ပုံလေးကို နိပ်ပြီးတော့လဲ နောက်ကွယ်မှာ Run နေတဲ့ App တွေကိုကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
Screen size ကြီးတဲ့ Device တွေအတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။ Home key ကနေ Back key (သို့) Home Key ကနေ Menu Key ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် one-handed mode ကို ဝင်လို့ရပါတယ်။
6. လျှို့ဝှက် Message
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ပို့ထားတဲ့ message တွေကိုလဲ ဖွက်ထားလို့ရပါသေးတယ်။ Message app ထဲမှာ Lock ပုံလေးပေါ်လာတဲ့အထိ လက်နှစ်ချောင်းနဲ့ ဆွဲချပါ။
7. Gallery ထဲမှာ ဓာတ်ပုံတွေ ဖွက်မယ်
Miui ရဲ့ Hidden Feature အလန်းစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ feature ကိုသုံးဖို့ Mi account နဲ့ sign in ဝင်ထားဖို့လ်ုပါမယ်။ ဖွက်လိုက်တဲ့ပုံတွေကို Mi Cloud မှာ သိမ်းပေးထားမှာပါ။ Gallery ထဲက Cloud ကိုသွားပြီး lock ပုံလေးပေါ်တဲ့အထိ အောက်ကိုဆွဲချပါ။
ပုံတွေကို တစ်ပုံချင်းမဟုတ်ပဲ Album လိုက်လဲဖွက်လို့ရပါသေးတယ်။ ဒီနည်းက ပုံတွေကို cloud ပေါ်မတင်ပဲ Gallery ထဲမှာပဲမပေါ်အောင် ဖွက်ထားမှာပါ။ ဖွက်ချင်တဲ့ Album ကို ခဏလောက်ဖိထားပြီး အောက်မှာပေါ်လာတဲ့ Hide ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။ ပြန်ဖော်ချင်ရင်တော့ Menu Key ကို ခဏဖိထားပြီး show hidden album ကို ရွေးပေးပါ။ ဖွက်ထားတဲ့ Album တွေကို အရောင်မှိန်မှိန်နဲ့ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး။ ပြန်ဖော်လိုတဲ့ Album ကို ခဏဖိထားပြီး Unhide ကို ရွှေးပေးရပါမယ်။
8. File တွေဘယ်လိုဖွက်မလဲ
နောက်ထွက်လာတဲ့ Miui update တွေမှာ Hidden Folder ဆိုပြီး ပါလာပါတယ်။ File explore ရဲ့ အဝင်စာမျက်နှာကို lock ပုံလေးပေါ်တဲ့အထိ ဆွဲချပါ။ File တွေ ရုပ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ ကိုဖွက်ထားနိုင်ပါတယ်။
Devices တွေရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ sensor တွေကောင်း မကောင်းကို စမ်းသပ်ဖို့ပါ။ setting => About Phone က Kernel Version ကို လေးချက် ဆက်တိုက်နိုပ်ပါ Hardware test ထဲရောက်သွားပါမယ်။ *#*#6484#*#* ကို နှိပ်ပြီးလဲ ဝင်လို့ရပါတယ်။
10. Quick Preview Notification
သိပ်တော့အသုံး မဝင်ပေမယ့် သိထားရအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ Notificationတက်တဲ့အခါ တက်တဲ့ App ရဲ့ icon မှာ အနီလေးနဲ့ 1,2,3 လို့ပြလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့လို အနီလေးတက်နေတဲ့ icon ကို နှစ်ချက်အမြန်နှိပ်ပါ။ Notification လေးကို ပုံပါအတိုင်းမြင်ရမှာပါ။
11. Menu Key ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံ
ဒါကတော့ လူသိတော်တော်နည်းမှာပါ Menu Key + Volume Down တွဲနှိပ်ပြီး screenshot ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ Menu Key + Volume Up နဲ့ တွဲနှိပ်ပြီး screen brightness ကို ယာယီတင်လို့ရပါတယ်။ နေပူထဲမှာ ဖုန်းသုံးတဲ့အခါမျိူးမှာ အဆင်ပြေစေမှာပါ။
12. Application တွေကို Lock ချထားမယ်
အခြားသူတွေကို အသုံးမပြုစေချင်တဲ့ App တွေကို Lock ခန်ထားလို့ ရပါသေးတယ်။ Setting -> Additional settings -> Privacy -> Privacy Settings သို့သွားပြီး Lock Individual Apps ကို on ပေးပါ။
Categories: Android, How To AndroidTags: Android, MIUI, Tips And Tricks